Umnyango Wezingxenye - Ellicott Dredges
Sigcina ngokungaguquki i-assortment enkulu yezingxenye ze-dredge ezingatholakala kalula phakathi kwe-yokusungula yethu futhi yathunyelwa ngqo nomaphi emhlabeni. Sinenhlanhla eyenele yokuba nesakhiwo sokwakha esitholakala kwikhampasi yethu. Lokhu kusivumela ukuthi sikhiqize ubukhulu bezingxenye ezisezingeni lendlu ezisivumela ukufeza izidingo ezikhuphukayo zamakhasimende ethu.
Isibonelo, indawo yethu yokukhiqiza isenza sikwazi:
Khiqiza izingxenye ezingaphakathi kwendlu ukuqinisekisa ikhwalithi.
Gcina ukukhetha okuningana kwezindawo okugcinwa kuzo endlini yethu yokubeka.
Nikeza ukulethwa ngokushesha kwezindawo eziningi noma kuphi emhlabeni.
Nikeza ngokuxhaswa okuqhubekayo okuvela emva kokuthengisa kusuka kumalungu eqembu lezingxenye ezinolwazi.
Thintana noMnyango Wezingxenye
Ucingo:+ 1 888-468-3228
or + 1 410-545-0239
Izingxenye ze-Cutterhead Dredge
Uchungechunge 370HP Dragon® Dredge
Uchungechunge 670HP Dragon® Dredge
Uchungechunge 870HP Dragon® Dredge
Uchungechunge 1270HP Dragon® Dredge
Uchungechunge 2070HP Dragon® Dredge
Izingxenye ze-Swinging Ladder Dredge
Uchungechunge 360SL Swinging Dragon® Dredge
Uchungechunge lwe-460SLM Swinging Dragon® Dredge
Uchungechunge 860SL Swinging Dragon® Dredge